Home Wararka Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay shil gaari oo ka dhacay deegaan u...
Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay shil gaari oo ka dhacay deegaan u dhow Garoowe.
Shil gaari oo ka dhacay bar-kontarool oo ku taala galbeedka magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa waxaa ku dhintay hal qof oo dumar ah halka ay shan kale oo qof ay ku dhaawacmeen shilkaas gaari ee dhacay.
Gaariga shilka galay ayaa waxa loo yaqaan PL-ka kaas oo ka kasoo baxay dhinaca degaanka lagu magacaabo Laacdheere gaariga shilka galay ayaana waxaa la sheegay in ay saarnaayeen dad gaaraya ilaa 10 ruux.
dadkii uu dhaawaca kasoo gaaray shilkaas gaari ayaa mid kamid ah la sheegay iney xaaladiisa caafimaad tahay mid liidata iyadoona lagu dabiibayo isbitaalka weyn ee magaalada Garoowe.
darawalkii waday gaariga shilka galay ayaa la tilmaamay in uu markii hore cararay balse markii danbe ay ciidamada booliska maamulka Puntland ay sheegeen in ay gacanta kusoo dhigeen, Darawalka ayaana la weydiin doonaa su,aalo ku aadan sida uu shilka u dhacay.
Todobaadkan gudihiisa ayey ahayd markii koox fanaaniin ah oo ka baxday magaalada Garoowe ee ay shil gaari ku galeen meel aan ka fowgeyn goobta uu hada ka dhacay shilka gaari, Waxaana deegaanada Puntland ku badan shilalka gaari ee ka dhaca deegaanada maamulkaas.
Villa Somalia oo sheegtay in uu baaqday shirkii Guddiga Amniga